'ဗျစ်ရည်ဆိုင်စောင့်တဲ့ ဘီလူး' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာ ဆံပင်ပုံစံကို အဓိကထားပြီးတော့ ပြင်ဆင်ထ?? - Yangon Media Group
‘ဗျစ်ရည်ဆိုင်စောင့်တဲ့ ဘီလူး’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာ ဆံပင်ပုံစံကို အဓိကထားပြီးတော့ ပြင်ဆင်ထ??
‘ဗျစ်ရည်ဆိုင်စောင့်တဲ့ဘီလူး’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာ ဆံပင်ပုံစံကို အဓိကထားပြီးတော့ ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ သရုပ်ဆောင် အိချောပိုက ပြောပါတယ်။ ”အဓိကပြင်ဆင်ဖြစ်တာက ဆံပင်ပုံစံလေးပါ။ ဒီဇာတ်ကားလေးက ဟာသဇာတ်ကားလေးလည်းဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ တခြားဇာတ်ကားတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ ပုံစံလေးတစ်မျိုးဆန်းသွားအောင်လို့ ထွင်ကြည့်လိုက်တဲ့ သဘောပါ”လို့ ပြောပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် အိချောပိုပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့’ဗျစ်ရည်ဆိုင်စောင့်တဲ့ဘီလူး’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို မတ် ၈ ရက်မှစတင်ပြီး ရုံတင်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်ထားတဲ့ကာရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း သရုပ်ဆောင်အိချောပိုက ယခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ”အဲဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာ အိချောက ‘မြမြမှီ’ဆိုတဲ့ ကာရိုက်တာနေရာကနေပြီးတော့ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဦးခင်လှိုင်ရဲ့ညီမနေရာကနေပြီးတော့ပါ။ ကိုကြီးတာနောကို တစ်ဖက်သတ်လိုက်ကြိုက်တဲ့ပုံစံပါ။ နောက် အိချောက နည်းနည်းစွာတဲ့ပုံစံဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုလာကြောင်တဲ့သူတွေကိုလည်း လက်ကအရင်ပါတဲ့သူတစ် ယောက်ပေါ့နော်”ဟု ပြောပါတယ်။ ယင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာ တွေ့ကြုံရတဲ့အမှတ်တရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
”ရိုက်ကွင်းအမှတ်တရကတော့ အများကြီးပါပဲ။ ဒီဇာတ်ကားလေးရိုက်တုန်းကဆိုရင် မိုးတွင်းကြီးဆိုတော့ မိုးတွေက တောက်လျှောက်ရွာတယ်။ ရှုတင်နားရတာတွေ၊ အသံတွေဆူလို့ ရိုက်လို့မရတော့လို့ ရပ်လိုက်ရတာတွေမျိုးစုံပါပဲ”လို့ သရုပ်ဆောင် အိချောပိုက ပြောပါတယ်။
‘ဗျစ်ရည်ဆိုင်စောင့်တဲ့ဘီလူး’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးသည် ဟာသဇာတ်ကားဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဇာတ်ဝင်ခန်း တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အချိတ်အဆက်မိမိနဲ့ ရိုက်ကူးထားပြီး ပညာပေးဇာတ်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်တယ်လို့ ပြောပြ ခဲ့ပြန်ပါတယ်။
”ဦးညီတို့ ကိုသြရသတို့က ဒိုင်ယာလော့ခ်လေးတွေဆိုရင် တိတိကျကျနဲ့ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအချိတ်အဆက် မိမိလေးနဲ့ ကာရန်နဘေးတွေနဲ့ လုပ်လေ့ရှိတာဆိုတော့ ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာလည်း အဲဒီလိုပဲ သူ့ဘာသာ အံ့ဝင်ခွင်ကျဖြစ်သွားတာပါ။ ဒီဇာတ်ကားလေးက ဟာသဇာတ်ကားဆိုပေမယ့်လည်း ၅၂၈ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တရားကိုလည်း ပုံဖော်ထားတဲ့ ပညာပေးဇာတ်ကားလေးတစ်ကားလို့ ပြောရင်လည်းရပါတယ်”လို့ သရုပ် ဆောင် အိချောပိုက ပြောပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ သရုပ်ဆောင်အိချောပိုအနေနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးများကို လက်ခံရိုက်ကူးလျက် ရှိနေ ပါတယ်။
'တာတူး' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာ ဝတ်စားပုံကို အေးသောင်းနဲ့ လုလုအောင်တို့ ပုံစံမျိုး အတုခိုးထား?
ကိုရီးယား ရဲတစ်ဦး၏ အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်ရပ်များ ဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင် မြောက်အမေရိကတိုက် ရုံ?
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ မဖျက်သိမ်းသရွေ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် တည်တံ့နေမည်
နှစ်ပေါင်း ၁၃ဝ ခန့်ရှိ လယ်ကိုင်းမြို့ဟောင်းမှ ဘားဝပ်ကျောင်း၏ ပြာသာဒ်ဆောင်များ ပြုပြင်ထိန်